Dhacdooyinkii Yaabka Lahaa Dagaalkii Labaad - Xogside-news
Home WARARKA CAALAMKA Dhacdooyinkii Yaabka Lahaa Dagaalkii Labaad
Xogside – Wargeyska Al-wadan ee dalka Masar ayaa daabacay maqaalo uu ka soo xigtay dhacdooyinkii cajiibka ah ee dagalkii labaad oo suxufiga Axmed Muslimani uu ka sii daayay TV Masar August. Waxaana ka mid ah dhacdadan : Markii ay ciidamadii Hitler ee Jarmalku soo galeen caasimadda Praise ayuu Hitler isku deyay inuu niyad jebiyo dadka Faransiiska.
Sidaas darted wuxu isku deyay inuu dadka uga khudbadeeyo Taallada weyn ee caanka ah ee ku taalla magaaladaasi laguna magacaabo Eiffel oo la dhisay sanadkii 1889, iyadoo 40 sano ahayd taallada ugu dheer dunida.
Dadka Faransiiska ayaa arintaasi ka xumaaday, kacdoona ka sameeyay si ay arinkaasi isu hortagaan. Shacabka ayaa jarjaray xadhkihii dabka ee Taallada , isla markaana burburiyay salaankii laga kori lahaa taalladaasi. Waxaana kacdoonkaasi baajiyay khudbadii xaqiraada ahayd ee Hitler ka jeedin lahaa caasimadda Faransiiska. ( AL-WadanNews)
Masaajid Badbaadiyay Bulshada Yuhuudda!
Waxa kale oo dhacdooyinka uu suxufigu barnaamijkiisa ku baahiyay ka mid ah qisadan : Markii Hitler iyo ciidamadiisu ay soo galeen Paris waxa la iska garanayay in dadka ugu horeeyay ee ay ku dhiiranayaan dilkooda ay dadka Yuhuudda ah,sidaas darted masaajid weyn oo ku yaalla magaalada Paris, ayaa bilaabay qorshe uu ku ilaalinayo dadka Yuhuudda ah si aanu ugu waxyeelayn Hitler bulshada Yuhuudda dil ama xadhig.
Masaajidka ayaa bulshada Yuhuudda ah siiyey waraaqo rasmi ah oo caddaynaya in ay Muslimiin yihiin, iyadoo Hitler iyo ciidankiisu aanay muslimiinta wax dhibaato ah u geysan jirin. ( AL-WadanNews)
Masaajid Badbaadiyay Bulshada Yuhuudda
Previous articleAldrich Hazen Ames: Basaaskii CIA-du Maraykanku Eeday
Next articleWaxa Lagu Meheriyay Hal Malyuun